Fepetra fampiasana - BikeHike
Ity fepetra sy fepetra manaraka ity dia mifehy ny fampiasana rehetra ny tranokala bikehike.org sy ny votoaty rehetra, ny serivisy ary ny vokatra azo jerena ao amin'ny tranokala na amin'ny alàlan'ny tranokala (nalaina miaraka, ny tranokala). Ny tranokala dia fananan'ny bisikileta ("bike"). Ny tranokala dia atolotra amin'ny fanekenao tsy misy fanovana ny fepetra sy fepetra rehetra voarakitra ato ary ny fitsipika rehetra miasa, ny politika (anisan'izany, tsy misy fetra, ny Politika momba ny tsiambaratelon'ny bisikileta) ary ny fomba fiasa izay mety havoaka tsindraindray amin'ity tranokala ity. bisikileta (miaraka amin'ny "Fifanarahana").
Vakio tsara ity fifanarahana ity alohan'ny hidirana na hampiasa ny tranokala. Amin'ny alàlan'ny fidirana na fampiasana ny ampahany amin'ny tranokala dia manaiky ho voafatotry ny fepetra sy fepetra amin'ity fifanarahana ity ianao. Raha tsy manaiky ny fepetra sy fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity ianao dia tsy mahazo miditra amin'ny tranokala na mampiasa serivisy. Raha heverina ho tolotra amin'ny bisikileta ireo fepetra sy fepetra ireo, dia voafetra amin'ireo fepetra ireo ny fanekena. Ny tranokala dia tsy misy afa-tsy ho an'ny olona 13 taona farafahakeliny.
Ny kaontinao bikehike.org sy ny tranokalanao. Raha mamorona blôgy/site ao amin'ny tranokala ianao dia tompon'andraikitra amin'ny fitandroana ny fiarovana ny kaontinao sy ny blôginao, ary tompon'andraikitra feno amin'ny hetsika rehetra mitranga eo ambanin'ny kaonty sy ny hetsika hafa rehetra mifandraika amin'ny bilaogy ianao. Tsy tokony hamariparitra na hanendry teny fanalahidy ao amin'ny blôginao amin'ny fomba mamitaka na tsy ara-dalàna ianao, ao anatin'izany ny fomba natao hivarotana ny anarana na ny lazan'ny hafa, ary ny bisikileta dia mety hanova na hanaisotra izay famaritana na teny fototra izay heveriny fa tsy mety na tsy ara-dalàna, na raha tsy izany dia mety hiteraka andraikitry ny bisikileta. Tsy maintsy mampandre avy hatrany ny bisikileta ianao amin'ny fampiasana tsy nahazoana alalana ny blôginao, ny kaontinao na ny fanitsakitsahana ny fiarovana hafa. Ny bisikileta dia tsy ho tompon'andraikitra amin'izay fihetsika na fanalana nataonao, ao anatin'izany ny fahasimbana na inona na inona vokatry ny fihetsika na ny fanalana azy.
Ny andraikitry ny mpandray anjara. Raha miasa blôgy ianao, maneho hevitra amin'ny bilaogy, mandefa fitaovana amin'ny tranokala, mandefa rohy ao amin'ny tranokala, na manao zavatra hafa (na mamela ny antoko fahatelo hanao) fitaovana azo alaina amin'ny alàlan'ny tranokala (izay fitaovana toy izany, "Content" ), Ianao no tompon'andraikitra tanteraka amin'ny votoatin'ny, sy izay mety ho voka-dratsy aterak'izany votoaty izany. Izany no zava-misy na inona na inona ny votoatiny resahina dia lahatsoratra, sary, rakitra audio, na rindrambaiko informatika. Amin'ny alàlan'ny fanomezana votoaty, dia maneho sy miantoka ianao fa: ny fampidinana, kopia ary fampiasana ny atiny dia tsy hanitsakitsaka ny zon'ny tompony, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny zon'ny mpamorona, patanty, marika na tsiambaratelo ara-barotra, an'ny antoko fahatelo;
ny bilaoginao dia tsy voatonona amin'ny fomba izay mamitaka ny mpamaky anao hieritreritra fa olona na orinasa hafa ianao. Ohatra, ny URL na ny anaran'ny blôginao dia tsy anaran'ny olona iray hafa noho ny tenanao na orinasa hafa ankoatry ny anao manokana; ary
anananao, raha ny votoaty misy kaody informatika, dia voasokajy sy/na nofaritana tsara ny karazana, ny toetra, ny fampiasana ary ny vokatry ny fitaovana, na nangatahana hanao izany amin'ny bisikileta na hafa.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana votoaty amin'ny bikehike mba hampidirina ao amin'ny tranokalanao, dia manome fahazoan-dàlana manerantany, tsy misy mpanjaka ary tsy manokana ny bisikileta hamerenana, hanovana, hampifanaraka ary hamoahana ny atiny ho an'ny fampisehoana, fizarana ary fampiroboroboana ny blôginao. . Raha mamafa votoaty ianao, dia hanao ezaka ara-drariny ny bisikileta hanesorana azy ao amin'ny tranokala, saingy ekenao fa ny cache na ny fanondroana ny atiny dia mety tsy ho azo avy hatrany.
Raha tsy mametra ny iray amin'ireo fanehoana na fiantohana ireo, ny bisikileta dia manana zo (na dia tsy adidy aza), amin'ny fahaiza-manaon'ny bisikileta irery (i) mandà na manaisotra izay votoaty izay, araka ny fiheveran'ny bisikileta, manitsakitsaka ny politikan'ny bisikileta na manimba na inona na inona. na tsy mety, na (ii) hamarana na mandà ny fidirana sy ny fampiasana ny tranokala ho an'ny olona na orinasa na inona na inona antony, araka ny fanapahan-kevitry ny bisikileta irery ihany. Ny bisikileta dia tsy manana adidy hanome famerenam-bola amin'izay vola naloa teo aloha.
Fandoavana sy Fanavaozana. Fepetra ankapobeny.
Amin'ny fisafidianana vokatra na serivisy ianao dia manaiky ny handoa bisikileta amin'ny alàlan'ny famandrihana indray mandeha sy/na isam-bolana na isan-taona (azo ampidirina amin'ny fifandraisana hafa ny fepetra fandoavam-bola fanampiny). Ny fandoavam-bola amin'ny famandrihana dia homena amin'ny alàlan'ny karama mialoha amin'ny andro fisoratana anarana ho an'ny fanavaozana ary handrakotra ny fampiasana an'io serivisy io mandritra ny vanim-potoana famandrihana isam-bolana na isan-taona araka ny voalaza. Tsy azo averina ny fandoavam-bola.
Raha tsy ampahafantarinao ny bisikileta alohan'ny faran'ny vanim-potoana famandrihana fa te hanafoana ny famandrihana ianao, dia hihavao ho azy ny famandrihanao ary omenao alalana izahay hanangona ny saram-pamandrihana isan-taona na isam-bolana azo ampiharina amin'izany famandrihana izany (ary koa ny haba rehetra) amin'ny fampiasana carte de crédit na fomba fandoavam-bola hafa anananay voarakitra an-tsoratra ho anao. Ny fanavaozana dia azo foanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fangatahanao amin'ny bisikileta an-tsoratra.
Serivisy. sarany; Fandoavana. Amin'ny fisoratana anarana amin'ny kaonty Services dia manaiky ianao fa handoa bisikileta amin'ny saram-panamboarana azo ampiharina sy ny sara miverimberina. Ny sara azo ampiharina dia hatao faktiora manomboka amin'ny andro nananganana ny serivisinao sy mialoha ny fampiasana ny serivisy toy izany. bikehike dia manana zo hanova ny fe-potoana fandoavam-bola sy ny sarany ao anatin'ny telopolo (30) andro mialoha ny filazana an-tsoratra aminao. Ny serivisy dia azonao foanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny filazana an-tsoratra telopolo (30) andro amin'ny bisikileta.
Fanohanana. Raha misy fidirana amin'ny fanohanana mailaka laharam-pahamehana ny serivisyo. Ny "fanohanana mailaka" dia midika hoe fahafahana manao fangatahana fanampiana ara-teknika amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny fotoana rehetra (miaraka amin'ny ezaka azo atao amin'ny alàlan'ny bisikileta hamaly ao anatin'ny andro fiasana iray) momba ny fampiasana ny serivisy VIP. “Laharam-pahamehana” dia midika fa ny fanohanana no atao laharam-pahamehana noho ny fanohanana ireo mpampiasa ny serivisy bikehike.org mahazatra na maimaim-poana. Ny fanohanana rehetra dia homena mifanaraka amin'ny fomba fanao amin'ny serivisy manara-penitra, ny fomba fiasa ary ny politika.
Ny andraikitry ny mpitsidika tranonkala. bikehike dia tsy nandinika, ary tsy afaka mamerina, ny fitaovana rehetra, anisan'izany ny rindrankajy informatika, navoaka tao amin'ny tranokala, ary noho izany dia tsy afaka tompon'andraikitra amin'ny atiny, ny fampiasana na ny vokatr'izany fitaovana izany. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny tranokala, ny bisikileta dia tsy maneho na milaza fa manohana ny fitaovana napetraka ao, na mino izy fa marina, mahasoa na tsy manimba ny fitaovana toy izany. Tompon'andraikitra amin'ny fitandremana araka izay ilaina ianao mba hiarovana ny tenanao sy ny rafitry ny solosainao amin'ny viriosy, kankana, soavaly Trojan, ary votoaty manimba na manimba. Ny tranokala dia mety misy votoaty manafintohina, tsy mendrika, na zavatra hafa tsy mety, ary koa ny votoaty misy tsy fahatomombanana ara-teknika, fahadisoana ara-tsoratra ary lesoka hafa. Ny tranokala dia mety ahitana fitaovana manitsakitsaka ny zon'ny fiainana manokana na ny fampahafantarana, na manitsakitsaka ny fananana ara-tsaina sy ny zon'ny hafa, ny an'ny antoko fahatelo, na ny fampidinana, kopia na fampiasana izay iharan'ny fepetra sy fepetra fanampiny, voalaza na tsy voalaza. Ny bikehike dia mandà ny andraikitra rehetra amin'ny loza mety hitranga amin'ny fampiasan'ny mpitsidika ny tranokala, na amin'ny fampidinan'ireo mpitsidika ny votoaty navoaka tao.
Votoaty navoaka tao amin'ny tranokala hafa. Tsy mbola nandinika, ary tsy afaka nandinika, ny fitaovana rehetra, anisan'izany ny rindrankajy informatika, azo alaina amin'ny alalan'ny tranonkala sy pejy web izay misy rohy bikehike.org, ary ilay rohy mankany amin'ny bikehike.org. Ny bisikileta dia tsy manana fifehezana amin'ireo tranonkala sy pejin-tranonkala tsy mpitaingina bisikileta, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny fampiasana azy ireo. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny tranokala na pejin-tranonkala tsy misy bisikileta, ny bisikileta dia tsy maneho na milaza fa manohana tranonkala na pejy web toy izany. Tompon'andraikitra amin'ny fitandremana araka izay ilaina ianao mba hiarovana ny tenanao sy ny rafitry ny solosainao amin'ny viriosy, kankana, soavaly Trojan, ary votoaty manimba na manimba. bikehike dia mandà izay tompon'andraikitra amin'ny loza mety hitranga amin'ny fampiasanao tranonkala sy pejin-tranonkala tsy misy bisikileta.
Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona sy Politika DMCA. Satria mangataka ny hafa hanaja ny zon'ny fananana ara-tsaina ny bisikileta, dia manaja ny zon'ny fananan-tsain'ny hafa izany. Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fitaovana hita ao amin'ny bikehike.org na ampifandraisina amin'ny zon'ny mpamorona, dia entanina ianao hampandre ny bisikileta mifanaraka amin'ny Politikan'ny Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) an'ny bikehike. Ny bisikileta dia hamaly ireo fampandrenesana rehetra ireo, ao anatin'izany araka izay ilaina na mety amin'ny fanesorana ny fitaovana mandika na manakana ny rohy rehetra amin'ny fitaovana mandika. Ny bisikileta dia hampitsahatra ny fidirana amin'ny mpitsidika sy ny fampiasana ny tranokala raha toa ka, ao anatin'ny toe-javatra mety, ny mpitsidika dia tapa-kevitra ny ho mandika ny zon'ny mpamorona na ny zon'ny fananana ara-tsaina hafa amin'ny bisikileta na ny hafa. Raha misy ny fampitsaharana toy izany, ny bisikileta dia tsy manana adidy hanome famerenam-bola amin'ny vola naloa teo aloha tamin'ny bisikileta.
Fananana ara-tsaina. Ity fifanarahana ity dia tsy mamindra anao amin'ny bisikileta na fananana ara-tsaina avy amin'ny olon-kafa, ary ny zo rehetra, ny anaram-boninahitra sy ny tombontsoa amin'ny fananana toy izany dia hijanona (toy ny eo amin'ny andaniny) irery amin'ny bisikileta. bikehike, bikehike.org, ny logo bikehike.org, ary ny marika hafa rehetra, marika serivisy, sary ary famantarana ampiasaina mifandraika amin'ny bikehike.org, na ny Tranonkala dia marika na mari-pamantarana voasoratra anarana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny bisikileta na bisikileta. Ny mari-pamantarana hafa, marika serivisy, sary ary logo ampiasaina mifandraika amin'ny tranokala dia mety ho mariky ny antoko fahatelo hafa. Ny fampiasanao ny tranokala dia tsy manome anao zo na fahazoan-dàlana hamokatra na hampiasa marika bisikileta na marika hafa.
Dokam-barotra. bikehike dia manana zo haneho dokam-barotra ao amin'ny blôginao raha tsy nividy kaonty tsy misy doka ianao.
Attribution. bikehike dia manana zo haneho rohy momba ny anarana toy ny 'Blog at bikehike.org', mpanoratra loha-hevitra, sy ny endri-tsoratra ao amin'ny tongotry ny blôginao na ny fitaovana.
Vokatra mpiara-miasa. Amin'ny fampahavitrihana vokatra mpiara-miasa (oh: lohahevitra) avy amin'ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay, dia manaiky ny fepetran'ny serivisy ianao. Azonao atao ny miala amin'ny fepetran'ny serivisy amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanesorana ny vokatra mpiara-miasa.
Domain Names. Raha manoratra anarana sehatra ianao, mampiasa na mamindra anaran-tsehatra efa voasoratra teo aloha, dia manaiky sy manaiky fa ny fampiasana ny anaran-tsehatra dia miankina amin'ny politikan'ny Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), anisan'izany ny azy. Zo sy andraikitry ny fisoratana anarana.
Fiovana. bikehike dia manana zo, araka ny fanapahan-keviny manokana, hanova na hanolo ny ampahany amin'ity fifanarahana ity. Anjaranao ny mijery tsindraindray ity fifanarahana ity raha misy fiovana. Ny fampiasanao na ny fidiranao amin'ny tranokala aorian'ny fandefasana ny fanovana rehetra amin'ity fifanarahana ity dia fanekena ireo fanovana ireo. Ny bisikileta dia mety hanolotra serivisy sy/na endri-javatra vaovao amin'ny hoavy amin'ny alàlan'ny tranokala (ao anatin'izany ny famoahana fitaovana sy loharano vaovao). Ireo endri-javatra sy/na tolotra vaovao ireo dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra sy fepetra amin'ity fifanarahana ity.
Famaranana. Ny bisikileta dia mety hampitsahatra ny fidiranao amin'ny rehetra na amin'ny ampahany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra, na misy antony na tsy misy antony, na misy na tsy misy filazana, mahomby avy hatrany. Raha te hampitsahatra ity fifanarahana ity ianao na ny kaontinao bikehike.org (raha manana ianao), dia azonao atsahatra fotsiny ny fampiasana ny tranokala. Na eo aza ireo voalaza etsy ambony ireo, raha manana kaonty serivisy karamaina ianao, ny kaonty toy izany dia tsy azo atsahatra amin'ny alàlan'ny bisikileta raha tsy mandika an'ity fifanarahana ity ianao ary tsy mahavita manasitrana izany fanitsakitsahana izany ao anatin'ny telopolo (30) andro manomboka amin'ny fampandrenesan'ny bisikileta anao momba izany; raha toa ka, afaka manafoana ny tranokala avy hatrany ny bisikileta noho ny fanakatonana ankapobeny ny serivisy. Ny fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity izay araka ny maha-izy azy dia tokony ho tafita velona amin'ny fampitsaharana dia tsy maintsy ho tafavoaka amin'ny fampitsaharana, ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny fepetra momba ny fananana, ny fandavana antoka, ny indemnité ary ny famerana ny andraikitra.
Disclaimer ny Warranty. Ny tranokala dia nomena "toy ny". bikehike sy ireo mpamatsy azy ary manome alalana dia mandà ny antoka rehetra na inona na inona, na mazava na an-kolaka, ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny antoka momba ny varotra, ny mety ho an'ny tanjona manokana ary ny tsy fanitsakitsahana. Na ny bisikileta na ny mpamatsy azy ary ny licences, dia tsy manome antoka fa tsy misy hadisoana ny tranokala na ny fidirana amin'izany dia mitohy na tsy tapaka. Takatrao fa misintona avy amin'ny, na mahazo votoaty na serivisy amin'ny alàlan'ny, amin'ny tranokala araka ny fanapahan-kevitrao sy ny loza mety hitranga.
Famerana ny andraikitra. Na ahoana na ahoana, ny bisikileta, na ny mpamatsy azy na ny licences, dia tsy ho tompon'andraikitra amin'ny lohahevitra rehetra amin'ity fifanarahana ity araka ny fifanarahana, ny tsy firaharahiana, ny andraikitra hentitra na ny teoria ara-dalàna na ara-drariny momba ny: (i) izay mety ho fahavoazana manokana, tampoka na vokatr'izany; (ii) ny vidin'ny fividianana vokatra na serivisy solon'ny entana; (iii) noho ny fahatapahan'ny fampiasana na fahaverezana na fanimbana ny angona; na (iv) ho an'izay vola mihoatra ny sara aloanao amin'ny fitetezana bisikileta araka ity fifanarahana ity mandritra ny roa ambin'ny folo (12) volana mialoha ny anton'ny hetsika. Ny bisikileta dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tsy fahombiazana na fahatarana noho ny zavatra tsy voafehin'izy ireo. Ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsy mihatra amin'ny fetra voararan'ny lalàna manan-kery.
Solontena ankapobeny sy fiantohana. Misolo tena sy manome antoka ianao fa (i) ny fampiasanao ny tranokala dia hifanaraka tanteraka amin'ny Politika momba ny fiainana manokana amin'ny bisikileta, miaraka amin'ity fifanarahana ity ary miaraka amin'ny lalàna sy fitsipika manan-kery rehetra (anisan'izany tsy misy fetra ny lalàna na fitsipika eo an-toerana ao amin'ny firenenao, fanjakana, tanànanao. , na faritra hafa an'ny governemanta, momba ny fitondran-tena an-tserasera sy ny votoaty azo ekena, ary ao anatin'izany ny lalàna manan-kery rehetra momba ny fampitana angona ara-teknika aondrana avy any Etazonia na ny firenena misy anao) ary (ii) ny fampiasanao ny tranokala dia tsy handika na manararaotra ny zon'ny fananana ara-tsaina na iza na iza.
Indemnification. Manaiky ny hanome onitra sy hihazona bisikileta tsy mampidi-doza ianao, ny mpiantoka azy, ary ny mpanome alalana azy, ary ny taleny, ny manamboninahitra, ny mpiasa ary ny masoivoho avy amin'izy ireo avy amin'ny ary manohitra ny fitakiana sy ny fandaniana rehetra, anisan'izany ny saram-pianaran'ny mpisolovava, vokatry ny fampiasanao ny tranokala, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fanitsakitsahanao ity fifanarahana ity.
Miscellaneous. Ity fifanarahana ity dia mandrafitra ny fifanarahana manontolo misy eo amin'ny bisikileta sy ianao momba ny lohahevitra eto, ary tsy azo ovaina afa-tsy amin'ny alalan'ny fanitsiana an-tsoratra nosoniavin'ny mpanatanteraka nahazo alalana amin'ny bisikileta izy ireo, na amin'ny fandefasana amin'ny alalan'ny bisikileta amin'ny dikan-teny nohavaozina. Afa-tsy araka ny lalàna manan-kery, raha misy, manome hafa, ity fifanarahana ity, ny fidirana na ny fampiasana ny tranokala dia hofehezin'ny lalàn'ny fanjakan'i California, Etazonia, tsy tafiditra ao anatin'izany ny fifanoheran'ny fepetra voalazan'ny lalàna, sy ny toerana mety hanaovana azy. ny fifandirana rehetra na avy amin'ny iray amin'ireo dia ny fitsarana federaly sy federaly ao amin'ny Fivondronan'i San Francisco, Kalifornia. Afa-tsy ny fitakiana fanamaivanana ara-drariny na ara-drariny na fitakiana momba ny zon'ny fananana ara-tsaina (izay azo entina eny amin'ny fitsarana mahefa raha tsy misy fatorana), ny fifandirana rehetra mipoitra amin'ity fifanarahana ity dia ho vahana amin'ny farany mifanaraka amin'ny Fitsipika Comprehensive Arbitration an'ny Service Judicial Arbitration and Mediation, Inc. (“JAMS”) avy amin'ny mpanelanelana telo voatendry araka ny fitsipika toy izany. Ny fanelanelanana dia hatao any San Francisco, Kalifornia, amin'ny teny anglisy ary ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia azo ampiharina amin'ny fitsarana rehetra. Ny antoko manjaka amin'ny hetsika rehetra na amin'ny fampiharana an'ity fifanarahana ity dia manan-jo amin'ny fandaniana sy ny saram-pianaran'ny mpisolovava. Raha toa ka misy ampahany amin'ity fifanarahana ity dia tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, io ampahany io dia ho raisina ho taratry ny fikasan'ny antoko tany am-boalohany, ary ny ampahany sisa dia hitoetra amin'ny heriny sy ny heriny manontolo. Ny fanafoanana ataon'ny andaniny sy ny ankilany amin'ny fepetra na fepetra amin'ity fifanarahana ity na izay fandikana izany, amin'ny toe-javatra iray, dia tsy hanafoana izany fepetra na fepetra izany na izay mety ho fandikana izany manaraka izany. Azonao atao ny manendry ny zonao amin'ity fifanarahana ity amin'ny antoko rehetra manaiky, ary manaiky hofehezin'ny fepetra sy fepetra; bikehike dia afaka manendry ny zony araka ity fifanarahana ity tsy misy fepetra. Ity fifanarahana ity dia hamatotra ary haharitra ho an'ny tombontsoan'ny antoko, ny mpandimby azy ary ny olona nomena alalana.